ရေစိုခံအသံချဲ့စက်နှင့်မီးရထားစက်မှုတယ်လီဖုန်း - JWAT305, တရုတ်ရေစိုခံအသံဖမ်းပါသောမီးရထားစက်မှုဖုန်း - JWAT305 ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co. , LTD
ရေစိုခံအသံချဲ့စက်နှင့်အတူမီးရထားစက်မှုတယ်လီဖုန်း - JWAT305
1.Engineering plastics injection moulding shell, high mechanical strength and strong impact resistance.
5.Waterproof plastic Keypad.
၁၂။ CE, FCC, RoHS, ISO12 လိုက်နာမှု
ချဲ့ထွင် Output ပါဝါ
ထုပ်ပိုး: 1sets/carton, 3.5kg/carton
horn Loudspeaker နှင့် Warning Light- JWAT307 ပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်းပုံစံစနစ်အသစ်ရာသီဥတုဆန့်ကျင်သောတယ်လီဖုန်း
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောတယ်လီဖုန်း - JWAT309 ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သော Trackside Broadcasting တယ်လီဖုန်း